—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊—– Q. ကျွန်မကလေးက အသက် ၄ နှစ်ပါ။ ပိန်လွန်းလို့ ဘယ်လိုကျွေးသင့်ပါသလဲ။ ထမင်းမစားချင်ဘူး။ သရေစာပဲ စားပါတယ်။ A. ကလေးအသက် (၄) နှစ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်က ပေါင်...
ကလေးဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဉာဏ်ကောင်းစေဖို့ နေ့စဉ်ကျွေးသင့်တဲ့အာဟာရ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– (၁) ကြက်ဥနှင့် ဥအမျိုးမျိုး ကြက်ဥမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ် ကိုလင်းနဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေက ကလေးငယ်တွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ တစ်နေ့ဘယ်လောက်ကျွေးသင့်သလဲ ကြက်ဥကို တစ်ရက်မှာ နှစ်လုံးကျွေးသင့်ပါတယ်။ (၂) နွားနို့နှင့်...
ကလေးများ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်ပြီး ရောဂါပိုးမဝင်ရောက်အောင် ကာကွယ်နိုင်မည့် အာဟာရ
—–၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ၊—– ကလေးတွေက ဒီအချိန်မှာဆိုရင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေက ကိုယ်ခံစွမ်းအားကျနေရင် ရောဂါပိုးတွေ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်နေဖို့ ဥပမာ-ဗီတာမင် စီများတဲ့ အစားအသောက်၊ ဇင့်များတဲ့ အစားအသောက်တို့က အခုချက်ချင်းစားရင် အခုချက်ချင်းမမြင့်ပါဘူး။...
—၊ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊— Q. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ အဓိကအနေနဲ့ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးသင့်ပါသလဲရှင့်။ ကိုယ်ဝန်သုံးလရှိနေပါပြီ။ A. ကိုယ်ဝန်စဆောင်တဲ့အချိန် သုံးလအတွင်းမှာတော့ ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာတွေ လုပ်ရပါမယ်။ ရှောင်သင့်တာတွေရှောင်ပြီး၊ စားသင့်တာတွေလည်း အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားရပါမယ်။ (၁)...
သင့်မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်
———၊ လရိပ်မေ ၊——— သင့်မှာ အာဟာရချို့တဲ့မှုရှိ၊ မရှိ အောက်ပါတို့ကိုကြည့်ပြီး ဆန်းစစ်နိုင်ပါတယ်။ လျှာက ပြောင်းလဲနေပါသလား လျှာဖြူနေပြီး ကွဲနေတာက သံဓာတ်ချို့တဲ့တာကြောင့်ပါ။ လျှာကွဲပြီး နာကျင်တာက ဗီတာမင် B3 ချို့တဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းကွဲနေတာက B12 ချို့တဲ့တာကြောင့်ပါ။...